यो पनि त्यो पनि सबै तपाई कै नाममा, मेरो नाममा चैं केही छैन!
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/229f2puru_camara.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
पुरुको कोलममा धेरै समयसम्म उही पुरानो लेख राखी नयाँ लेखलाई स्थान दिन नसकेकोमा मलाई खेद छ। यही कुरालाई मनन गरी पाठकबर्गहरुको लागि एउटा कोरियन चुट्किला लिएर आएको छु। मलाई आशा छ यहाँहरुले मन पराउनु हुनेछ।
एकदिन श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई फोन गरिन् ।
श्रीमान्: हाइ मेरी रानी, मेरो हृदयको धड्कन! किन अचानक यसरी फोन गर्यौ ?
श्रीमती: तपाईको धेरै याद आयो अनि फोन गरेकी नि!
श्रीमान्: हो र? मलाई पनि तिम्रो अति नै याद आईराखेको छ । कहिले अफिसको काम सकिएला र घर पुगुंला भैराछ ।
श्रीमती: म तपाईलाई पर्खेर बस्छु छिटो आउनू ल?
श्रीमान् घरमा पुग्छन् ।
श्रीमती: सुन्नुहोस् न, मलाई आज तपाईसंग एउटा कुरा गर्नु छ ।
श्रीमान्: के हो भन न ।
श्रीमती: यो घर कसको नाममा छ ?
श्रीमान्: किन र ? किन अचानक यस्तो प्रश्न?
श्रीमती: हैन मलाई बुझ्न मन लागेर मात्र हो । भन्नुस् न प्लीज्...
श्रीमान्: मेरो घर भएपछि अवश्य मेरो नाममा छ ।
श्रीमती: अनि हाम्रो गाडी नि ?
श्रीमान्: त्यो पनि मेरै नाममा छ ।
श्रीमती: अनि बुसानमा भएको हाम्रो ५ तल्ले घर नि ?
यति भनेपछि श्रीमती झोक्किइन् र भनिन्:
यो पनि त्यो पनि सबै तपाई कै नाममा, मेरो नाममा चैं केही छैन ।
श्रीमान्: तिम्रो नाममा पनि त छ नि !
श्रीमती: खोइ के छ त मेरो नाममा ?
श्रीमान्: म तिम्रै नाममा त छु नि! हाहा ।